Ny Princess Cruises Emerald Princess dia miverina miasa any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny Princess Cruises Emerald Princess dia miverina miasa any Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Princess Cruises Emerald Princess dia miverina miasa any Etazonia.
Ny sambo Princess Cruises eny ambonin'ny sambo Emerald Princess dia misy ho an'ny vahiny izay nahazo ny fatra farany tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 nekena farafahakeliny 14 andro talohan'ny nanombohan'ny sambo ary efa voaporofo ny fanaovana vaksiny.
Ireo vahiny voalohany indrindra Emerald Princess dia noraisin'ireo mpiasa an-tsambo niaraka tamin'ny lanonana manokana tamin'ny fanapahana tadina.
Emerald Princess dia kasaina ho tonga any Ft. Lauderdale amin'ny 30 Oktobra 2021 ary handeha sambo fitsangantsanganana an-dranomasina Panama 10 andro, dia avy any Ft. Lauderdale hatramin'ny Desambra 2021.
Ny vaksinin'ny ekipa an'ny Emerald Princess dia mifanaraka amin'ny torolàlana CDC.
Princess Cruises androany no nanamarika ny fiverenan'ny sambo fahatelo an'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo amerikana - Emerald Princess - niainga avy tao amin'ny Port of Los Angeles tamin'ny sambo lakandrano Panama 15 andro nankany Ft. Lauderdale. Ireo vahiny voalohany Emerald Princess dia noraisin'ireo mpiasa an-tsambo an-tsambo niaraka tamin'ny lanonana manokana nanapaka ny tadiny.
Niainga avy tao amin'ny Port of Los Angeles tamin'ny sambo lakandranon'i Panama 15 andro i Emerald Princess niverina niasa ary nandray ireo vahiny voalohany niverina an-tsambo.
Manolotra i Emerald Princess Fialantsasatra MedallionClass, mitondra ny fitsangantsanganana farany tsy misy ezaka, manokana. Ny Medallion dia fitaovana azo ampitaina ampahefatra ary mamela ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitaterana maimaimpoana ka hatramin'ny fitadiavana olon-tiana na aiza na aiza ao anaty sambo, ary koa serivisy manatsara toy ny fananana izay ilain'ny vahiny, atolotra azy ireo mivantana, na aiza na aiza misy azy ireo. Izy io dia nekena ho fitaovana farany azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manerantany.
Princess Cruises Ny sambo an-tsambo Emerald Princess dia misy ho an'ny vahiny izay nahazo ny fatra farany tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 nahazo fankatoavana farafaharatsiny 14 andro talohan'ny nanombohan'ny sambo ary efa voaporofo ny fanaovana vaksiny. Ny vahiny vaksiny feno rehetra dia tsy maintsy mamokatra fitsapana COVID-19 (PCR na antigène) voadinika ara-pahasalamana izay natao tao anatin'ny roa andro taorian'ny nanombohany ny sambo Princess rehetra. Ny vaksinin'ny mpiasa dia mifanaraka amin'ny torolàlana CDC.
Princess Cruises dia orinasa iraisam-pirenena momba ny sambo fitsangantsanganana ary orinasam-pitaterana miasa amina sambo fitaterana an-tsambo 14 maoderina, mitondra vahiny roa tapitrisa isan-taona mankany amin'ny toerana 380 eran'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny Caribbean, Alaska, Canal Panama, Riviera Meksikana, Eropa, Amerika atsimo, Aostralia / Nouvelle Zélande, Pacific South, Hawaii, Asia, Canada / New England, Antarctica, ary World Cruises.